के सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी प्रयाप्त छ ?
एकदिन मलाई एउटा विद्यालयले छात्रवृत्तिमा सहयोग गरे वापत सम्मान गर्ने भनेर कार्यक्रममा बोलायो । उक्त कार्यक्रममा मैले काठमाडौंका एक जना वडाअध्यक्षले ‘सरकारले निशुल्क शिक्षा भनिरहेको बेला छात्रवृत्तिको ...
मिडिया काउन्सिल विधेयक : २९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा दर्ता भई विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विवादित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता...
परमाणु हतियार सम्पन्न मुलुकमा सानो युद्ध हुँदैन – प्रधानमन्त्री खान
एजेन्सी । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले इस्लाम शान्तिको धर्म भएको तथा आतंकवादको धर्मसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । ५६ औं कन्भेन्सन अफ इश्लामिक सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिका (आइएसएनए)लाई आइतबार...
पत्रकारसहित दश जना पक्राउ, १८ करोड हिनामिनाको आरोप
दाङ । दाङको नाराणपुरस्थित देव बैंकको झन्डै १८ करोड हिनामिनाको आरोपमा एक पत्रकारसहित दश जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बैंकको रकम घाटाला काण्डमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले पत्रकार उज्वल आचार्यसहित ...
१० वर्षपछि खोलियो पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका
काठमाडौं । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज महादेवको पूजा आराधना गरी मनाईंदैछ। पशुपतिनाथसहित देशभरका शिव मन्दिरमा बिहानैदेखि दर्शनार्थी महिलाको घुइँचो लागेको छ। २०६५ सालदेखि भक...
यस्तो छ ‘चिनियाँ ह्याकरहरू’को रहस्य !
काठमाडौं । हिजो( शनिवार) दिउँसो करिब ४ बजे काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रहरी अधिकारी आन्तरिक बैठकमा व्यस्त थिए । बैठक चलिरहेका बेला परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीको फोनको घण्टी बज्यो । ‘दरबारमार्गमा र...
काठमाडौं । आज भाद्र शुक्ल द्धितिया अर्थात दर खाने दिन । हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज हिन्दु नारीहरुले दर खाने प्रचलन छ । विभिन्न मिष्ठान्न परिकारका साथ आज दर खाएर तीज पर्व मनाइँदैछ । भोली बस्ने निर...
सोलुखुम्बु । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ । सोलु–काठमाडौँ सम्पर्क समितिले केसीलाई अनुशासनको कारवाही गर्न माग गरेको समितिका महासचिव रो...
झापा । झापाको मेचीनगरबाट ब्राउन सुगरसहित तीन जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट लागुऔषध ब्राउन सुगर एक ग्राम १०० मिलिग्राम बरामद गरेको छ । मोरङ बेलबारी–३ का २४ वर्षीय सन्तोष खड्का...
एजेन्सी । ब्रेक्जिटको मिति नजिकिदै गर्दा बेलायतको संसद करिब पाँच साताका लागि निलम्बित गरिएको छ । सरकारले संसद निलम्बनका लागि गरेको सिफारिस बेलायती महारानीले स्वीकृत गरेकी हुन् । यसको अर्थ सेप्टेम्बरक...
हामीलाई चीनको जरुरत छैन: राष्ट्रपति ट्रम्प
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन विरुद्ध हमला बोलेका छन । चीनको तर्फबाट अमेरिकी सामानमा नयाँ शुल्क लगाउने तयारी गरेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, हामीलाई चीनको जरुरत छैन । यदि इम...
रवि लगायत तीन विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरिदै
काठमाडौं । टेलिभिजन पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण नयाँ मोडमा प्रवेश गर्दैछ । विगत १० दिन देखी पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका न्यूज २४का पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कडे...
करिब दुई महिनापछि प्रदेश-३ को प्रदेश सभा बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रदेश-३ को प्रदेश सभा बैठक बस्दैछ । झण्डै दुई महिनादेखी रोकिदै आएको प्रदेश सभाको बैठक आज (आइतबार) बस्न लागेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेपछि गत असार १२ गते बाट स्थगित बैठक आज ...
सुनको मुल्य हालसम्म कै उच्च
काठमाडौं । पछिल्लो समय सुनको मुल्य अस्वाभिक तवरले बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको अस्थिरताले सुनको मुल्य दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । हिन्दु नारीहरुको महानपर्व हरितालिका तीज नजिकिएसँगै नेपाली ...
रवी लामिछाने सहित तीन जनालाई अदालतमा पेश गरिदै
काठमाडौं । टेलिभिजन पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका न्यूज २४ का पत्रकार रवि लामिछाने सहित तीन जनालाई अदालतमा पेश गरिदिैछ । पत्रकार पुडासैनी आत्महत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका...
पूर्व भारतीय अर्थमन्त्री जेट्लीको निधन
काठमाडौं । पूर्व भारतीय अर्थमन्त्री तथा भरतीय जनता पार्टीका नेता अरुण जेटलीको निधन भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री जेट्लीको शनिबार ६६ वर्षको उमेरमा निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन । श्वासप्रश्...
उज्यालोको खोजीमा संघर्षका पाइला
खिमा रिजाल माओवादी ससस्त्र संघर्षमा होमिएकी संगठन पट्टिकी एक होनहार योद्धा हुन् । उनले विचार र माक्र्सवादी आस्थालाई मुलुकको परिवर्तनको अभियानमा आदर्श मार्गको रूपमा छनौट गरिन् । नेपालको राजनीत...